Inona ny taratasy fampahalalana "ART bee HIVE"? | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Inona no atao hoe tantely HIVE?
Taratasy fampahalalana isan-telo volana izay misy fampahalalana momba ny kolontsaina sy ny zavakanto eo an-toerana, izay vao noforonin'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota WardTsy ny fampahalalana ny zava-nitranga tamin'ny fikambananay ihany, fa ny fitaovana famakiana manokana momba ny fampisehoana hetsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto toy ny galeria tsy miankina sy ny asan'ny zavakanto an'ny mponina ao amin'ny paroasy no zaraina maimaimpoana manerana ny paroasy.
Inona ny corps tantely?
"ART bee HIVE" dia taratasy fampahalalana ho an'ny tetik'asa karazana fandraisana anjaran'ny mponina ao amin'ny paroasy.Ireo mpanao gazety ao amin'ny paroasy mpilatsaka an-tsitrapo "Mitsubachi Corps" dia hiara-miasa amin'ny fanangonana vaovao sy fanomanana sora-tanana, toy ny tafatafa sy dinidinika.
Momba ny taratasy fampahalalana momba ny fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward "ART bee HIVE"
Fampisehoana manokana momba ny hetsika zava-kanto ao an-toerana, fampidirana galeriera tsy miankina, fampahalalana momba ny hetsika zavakanto, fampidirana ireo olona koltoraly mifandraika amin'i Ota Ward, sns.
Ankoatra ny fizarana maimaimpoana manerana ny Ota Ward amin'ny alàlan'ny fampidirana gazety, dia zaraina ao amin'ny Ota Ward Hall Aplico, Ota Ward Plaza, Ota Bunkanomori, ary trano hafa koa.
Manodidina ny 120,000 kopia
Olana lohataona: 10 aprily, laharana fahavaratra: XNUMX jolay, laharana fararano: XNUMX oktobra, laharana ririnina: XNUMX janoary
Haben'ny tabloid (pejy 4) Loko feno
Tsindrio eto raha hiverina isa